Maty novonoina ny mpamorona sady webmaster-n’ny mpanohitra ao amin’ny tranonkalam-baovao Ingush · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Janoary 2019 3:59 GMT
Maty novonoina i Magomed Yevloyev, mpamorona sady webmaster-n’ ny tranonkalam-baovaon'ny Ingush mpanohitra, Ingushetiya.Ru, nandritra ny fihazonan'ny polisy azy. Nitatitra ny tranonkalany fa voatifitra teo amin'ny lohany i Magomed rehefa avy nosamborin'ny manampahefana Ingush tamin'ny fahatongavany tao amin'ny seranam-piaramanidina Nazran (Magas). Nodimandry tany amin'ny hopitaly izy.
Niray zotram-piaramanidina tamin'ny filohan'i Ingushetiya, Murat Zyazikov izy. Tao amin'ny seranam-piaramanidina, nandidy ny polisy i Zyazikov mba hisambotra an'i Yevloev, ary napetraka tao anaty fiaran'ny polisy izy. Nalefa tany amin'ny hopitaly repoblikana ao Nazran avy eo ny vatan'i Yevloev, izay misy bala ao amin'ny lohany.
Mpanohitra malaza an'i Murat Zyazikov, filohan'i Ingushetiam, mpanohana an'i Kremlin, i Magomed. Araka ny voalazan'i Miami Herald, nahatezitra an'i Rosia tamin'ny fanakianana ny fitondran'ny polisy ny sivily ao amin'ny faritra i Yewloyev. “Nandidy azy hanakatona ny tranokalany ny fitsarana tamin'ny volana jona noho ny fampielezana fanambarana “mahery fihetsika” saingy nipoitra indray tamin'ny anarana hafa.“